အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Ohm.inn - ဝီကီပီးဒီးယား
""== ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါ၏! ==
မင်္ဂလာပါ Ohm.inn။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝီကီရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
Mayor mt (ဆွေးနွေး) ၁၂:၂၁၊ ၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ (UTC)""
File:တရုပ်ပေသီးနှင့်အလားတူသော အဗေးကပ်ခေါ် ရောမတို့၏ ဂဏန်းတွက်ကိရိယာ.JPG ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာပြင်ဆင်
File:တရုပ်ပေသီးနှင့်အလားတူသော အဗေးကပ်ခေါ် ရောမတို့၏ ဂဏန်းတွက်ကိရိယာ.JPG ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၂၂၊ ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ (UTC)
I noticed that you had recently created an article as Rome Abacus. As this is Myanmar Wikipedia, we encourage editors to use Burmese title as possible. So, I moved your article as ရောမပေသီး and you can continue editing at there. Thanks. Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၃၂၊ ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Ohm.inn&oldid=432832" မှ ရယူရန်
၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၀:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၀:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။